ဆန်ဟင်းလျာများ, ဖက်ထုပ်, buns, နွေဦးပေါက်လိပ် - သင်ကအမည်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မီနူးပေါ်မှာနေနှင့်အဖြစ်စစ်မှန်အရသာ မင်းကတရုတ်မှာရှိရင်. ဒါကဥရောပအကောင်းဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်များ၏တဦးတည်းအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားရဲ့အဘယ်အရာကိုဖွင့်. သငျသညျရထားအမ်စတာဒမ်ရရန်ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်, သင်လုပ်နိုင်သည် ပဲရစ်ကနေရထားစီးဖမ်း, ဘာလင်, နှင့်အခြား ဥရောပမြို့ကြီးများ.
Cite Du Dragon သည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်များဖြစ်သောဘရပ်ဆဲလ်ဖြစ်သည်, ဘယ်လ်ဂျီယံ
တစ်ဝါကြွားတတ်ကြောင်းနောက်ထပ်စားသောက်ဆိုင် စိတ်ကူးအတွင်းပိုင်း ယင်း၏အံ့သြဖွယ်ဟင်းလျာများနဲ့တွဲပြီးနှင့်ဥယျာဉ်ဒီဇိုင်း, ကိုးကားဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ဒူနဂါးကွက်တိဥရောပအကောင်းဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်တယောက်ကိုခေါ်နေသည်. ကျော်နှင့်အတူ 300 ထိုင်ခုံနှင့်တစ်ခုလက်ရာမြောက်သောတန်ဆာဆင်ဥယြာဉျ, သင်တစ်ဦးသင့်လျော်သောအရှေ့တိုင်းအိပ်မက်ထဲသို့လမ်းလျှောက်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်. မဆိုပန်းကန်အံ့ဩဘွယ်ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ငါတို့ကမှေးမှိန်သွားတဲ့ sum နဲ့အိမ်အထူးကိုထုတ်လိုက်မယ်, ပီကင်းဘဲ, သငျသညျနေပါလျှင်အရာနှစ်ခုအဖြစ်သငျသညျကွိုးစားရမယ် ရထားဘရပ်ဆဲလ်သွားရောက်လည်ပတ်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-chinese-restaurants-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#အချစ် #BestChineseRestaurants #တရုတ်အစားအစာ europetravel ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ်